५ सीटे जीपमा ४० यात्रु , ट्राफिककाे अाँखामा धूलो उडाउँदै ! – Radio Madi
५ सीटे जीपमा ४० यात्रु , ट्राफिककाे अाँखामा धूलो उडाउँदै !
प्यूठान : बाग्दुला–मरन्ठाना–चुदरीखोला ग्रामीण सडक खण्डमा संचालन हुने अधिकांश जीप हरेक दिन खचाखच यात्रु बोकेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका छन्
जीपभित्र जम्मा ५ जनाको लागि आरामदायी सीट हुन्छ । सीटबाहेक केही मुडा र छतमा त यात्रु बस्छन् नै । त्यसमा पनि नअटाउने पछाडिको ‘क्यारिअर’मा समेत झुन्डिन्छन् । जम्माजम्मी ५ जनाको सीट क्षमता भएको जीपमा हरेक दिन ४० भन्दा बढी यात्रु झुन्डिएरै यात्रा गर्छन् ।
प्रहरीकै अघि लापरवाही
बाग्दुला–मच्छि–ठूलावेसी सडकखण्ड अन्तर्गत झिमरुक गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै मच्छि (तिलहाल्ना) मा इलाका प्रहरी कार्यालय छ । प्रहरीको आँखै अघि छतभरी यात्रु बोकेर धुलो उडाउँदै जीपहरु गुड्छन् । प्रहरीले भने जीपलाई रोकेर यात्रु ओराल्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।केही जिपहरु चाहीँ प्रहरी कार्यालय अगाडि यात्रु ओराल्छन् र केही पर पुगेपछि रोकेरै फेरि चढाउँछन् ।
जीप चालक मात्रै नभएर यात्रु आफैँ झुन्डिएर यात्रा गर्दा असहज मान्दैनन् । टाढाको यात्रा, थोरै गाडी भएकाले पनि आफूहरु झुन्डिएरै यात्रा गर्न बाध्य भएको यात्रुहरुको तर्क छ ।
तर यसरी यात्रा गर्नेहरुको बिमा समेत हुँदैन । साँघुरो, खाल्डाखुल्डी र उकालो सडकमा हरेक दिन यात्रुहरु आफैँ ज्यान जोखिममा राखेर जीपमा यात्रा गर्दै आएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरीका अनुसार जिल्लामा विस्तार भएका सडक सञ्जाल र जीप संख्याको अनुपात मिलेकै छ । जिल्लाभर सानाठूला गरी झण्डै दुइसय सवारीसाधन छन् ।तर पनि जीपले क्षमता भन्दा अत्याधिक बढी यात्रु बोक्ने क्रम रोकिएको छैन । यतिसम्म कि, क्षमता भन्दा पनि तेब्बर संख्या यात्रु जीपमा भर्छन् ।
मरन्ठाना हुँदै चुदरीखोला, सेपुङ, जुम्रिकाँडा, बरौला, स्वर्गद्धारी, नारीकोट, अर्खा, रजवारा, बाहाने, माझ र फोप्लीका गाउँमा संचालन हुने अधिकांश जीपहरुले यसरी जोखिमपूर्ण यात्रा भर्दै आएका हुन् ।
प्रहरी भने आफ्नै कार्यालयअघि दर्जनौँ यात्रु कोचेर गुड्ने जीपका चालकलाई नदेखे झैँ गर्छन् । क्षमताभन्दा तेब्बर यात्रु बोकेर गुड्ने जीपलाई प्रहरीेले समेत कहिल्यै नियमन गरेको छैन ।
यस क्षेत्रमा चल्ने जीपहरुलाई निगरानी गरे पनि गाडी चालकले अटेरी गर्दै आएको बताउँछन् ट्राफिक प्रहरी । बाग्दुला क्षेत्रमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी राजेशजंग शाहका अनुसार क्षमता भन्दा बढी यात्रु यात्रा गराउने १५ देखि २० जीप दैनिक कारवाहीमा पर्छन् ।
तै पनि ट्रापिकको आँखा छलेर जीप दौडाउने गरेको ट्राफिक प्रहरी नै स्वीकार गर्छ । जिल्लामा जनशक्ति कम हुँदा गाउँमा चेकजाँच प्रभावकारी बनाउन नसकेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय प्यूठानका प्रमुख छविलाल ढकाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार हाल जिल्लाभर जम्मा ११ ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् । ‘सडकमै पुगेर गाडीचालकलाई सचेत पनि गराएका छौँ’, ढकालले भने, ‘तर, सोचेअनुसार नियन्त्रण गर्न अझै सकिएको सकिएन ।’